Ny rindrina Grey an'ny renivohitra miaraka amin'ny lokony marevaka an'ny mpandoko | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06Rindrina fotsy volo amin'ny renivohitra misy lokony amin'ny loko mainty
11 / 05 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, PHOTOS, ANKAPOBENY, TORKIA
Ny rindrin'ny volondoha ao an-drenivohitra dia maro loko miaraka amin'ireo fihetsik'ireo mpanao hosodoko
Ny kaominin'i Ankara Metropolitan dia mandoko ny ambanin'ny mpandeha an-tongotra, ny tetezana ary ny rindrina tsy misy rindrina any an-drenivohitra miaraka amin'ireo mazoto amin'ireo mpanao hosodoko. Miaraka amin'ny tetikasa napetraky ny Ben'ny tanànan'ny Metropolitan Mansur Yavaş, mpanao hosodoko tao an-drenivohitra kosa dia manao sonia ny zavakanto amin'ny faritra maro eto an-tanàna. Painter Şenol Karakaya sy ny ekipany dia nanolotra ny Elmadağ Entrance Bridge underpass, Cinnah Caddesi Kuloğlu ambanin'ny tany ary eo amin'ny Ivotoerana ho an'ny zokiolona sy ny fampitaovana ho an'ny tanora miaraka amin'ireo sary hoso-doko ao amin'ny Ankara sy ny sary tulip.
Ny kaominin'i Ankara Metropolitan dia mandoko ambanin'ny ambanin'ny lalana an-tongotra, ny tetezana ary ny rindrina tsy misy rindrina any an-drenivohitra sy ny distrika miaraka amina firaisana mirindra sy aesthetic.
Ny tetikasa tarihan'ny Ben'ny tanàna Metropolitan Mansur Yavaş ary napetraky ny Departemantan'ny Urban Aesthetics, ambanin'ny lalana an-tongotra, ny tetezana ary ny rindrina vita amin'ny kongoka fotsy volo; Nihaona tamin'ny sarin'ireo sary ny mpanakanto Şenol Karakaya sy ny ekipany.
NY TRANO PROJEKO NIVORA TANY
Ny asa kanto noforonina tamin'ny fiaraha-miasa mpanao sary Şenol Karakaya miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpanao hosodoko 7 dia ankasitrahan'ny olom-pirenena ihany koa.
Şenol Karakaya, izay nilaza fa te hamelona indray ireo tandindon'ny renivohitra izy ireo amin'ny alàlan'ny sary hosodoko, dia nanome izao fampahalalana manaraka izao momba ny asa:
“Tena faly aho mandray anjara amin'ity tetik'asa natolotry ny Ben'ny tanànan'i Metropolitan Mansur Yavas tamin'ny Novambra 2019 ity. Te-hanome fomba fijery zava-kanto amin'ny olona isika, ho lasa tanàna maoderina ary hitondra ny galàzan'ny zavakanto amin'ny arabe. Tian'ny pretranay koa ny fanesorana ny rindrina fotsy volo amin'ny Ankara. Noho io tanjona io, mandray anjara amin'ity tetikasa ity izahay. Amin'ny fampidirana ireo endrika zavakanto ara-javakanto dia mikendry ny hitondrana fiainana ho an'ireo tanàna isika ary hitondra voajanahary sy loko amin'ny olona eo amin'ireo trano vato. ”
Ilay mpanao sary hosodoko Rabia Karakaya, izay nandoko ny rindrin'ny renivohitra miaraka amin'ny vadiny Şenol Karakaya, dia nilaza hoe: "Ny tanjonay dia ny hampiaraka ny olona miaraka amin'ny popa rehefa mandeha any am-bavahadiny, varavarankely ary arabe izy ireo. Manampy fanasana mirary ho an'ny tanàna. Takatsika io tetik'asa io miaraka amin'ny lanjan'ny filoham-pirenena Mansur Yavas ho an'ny zavakanto sy ny artista. Izahay dia manao izay azonay atao mba hahatonga an'i Ankara ho tanàna maro loko amin'ny alàlan'ny fandokoana ny aretin-doko. ”
SOMBINY NY FIANGONANA REHETRA
Ireo mpanao hosodoko izay nanova ny Elmadağ Fidirana Lalamby fidirana, Kenan Evren Boulevard Underpass, Cinnah Avenue Kuloğlu Pedestrian ambanin'ny tany ary eo amin'ny lisitry ny fidirana amin'ny zotram-bokin'ny tanora sy ny efitrano misy ny tanora sy ny zon'ny tanora. Asongadiny ihany koa ny tandindon'ny renivohitra, toa ny Catara Ankara, ny Ankara Cigdem ary ny Pigeon Fotsy Ankara ary ny tulip.
Naneho ny fahafaham-pony tamin'ny fandokoana ny rindrina, hoy ny Kaldean, 61 taona, nilaza hoe: «Efa nanomboka ny asa mendrika an'i Ankara. Manaraka amin'ny asa nomen'ny Filohan'ny Mansur ny zava-dehibe amin'ny zava-kanto isika. Mipetraka amin'ireo antontam-bary mivaingana izahay ary manomboka misokatra amin'ireo loko natoraly ireo. Nilaza i Sultan Akbal fa ho toy ny fialamboly izy ary mitaona ny sain'ireo sary hosodoko rehefa mandalo ny ambanona. Mahazo tombony ihany koa ny fanaovan-javatra manokana indrindra ho an'ny ambanona satria tsy nisy nahatsikaritra fa nisy ambanin-trano rehefa niampita. Misaotra ny Filohan'ny Mansur ihany koa aho noho ny sandany nomeny an'i Ankara sy ireo mpanakanto. ”
Fampahafantarana momba ny tolotra: Hividy volon-koditra miloko mena (TUDEMSAS)
Ny fametrahana fandaharana eo amin'ny rindrin'ny Bursaray dia resahina
Fanamarihana amin'ny fahazoana azy: Fandokoana ny tamba-jotra vy sy vy vy İh
Filohan'ny faritany BBP Bursa Ünsal: rindrina BURSARAY vita amin'ny ahitra voajanahary ary…
Famoahana ny fanehoan-kevitra: Famaranana sy fananganana rindrina lamasinina maivana
Ny rindrin'i Istanbul dia voaravaka amin'ny voninkazo an-tampon'ny Metrobus
Fanamarihana momba ny fanangonana: Sary hosodokon'ny Metro eo anelanelan'i Gökdere sy Kestel
Istanbul Subway Works 7 no nanamboatra ny Mandan'ny trano
Ny Rindrin'ny Lapan'ny Topkapi miatrika Marmaray dia atahorana
Bursa T2 fandaminana ny rindrin'ny rindrina
Fanamarihana amin'ny fangatahana: Tsipika Konya-Karaman KM: 84 + 500 - 88 + 700 eo anelanelan'ny rivotra Yap
Fiaramanidina maizim-bolo amin'ny alàlan'ny fiara fitateram-bahoaka ao Uludag
Sary nalaina avy amin'ny Palandöken
Lasa marokoroko ny tetezan'ny Junction
Ankara fotsy Pigeon
Elmadağ miditra amin'ny tetezana ambanin'ny tetezana
Fotoam-pamindrana otrikaretina vaovao amin'ny fitaterana Konya
Voaroy amin'ny Eskişehir ny Stam Tram
Mora kokoa ny arabe eto an-drenivohitra miaraka amin'ireo marika tondrozotra
Mifanakalo hevitra momba ny fivoaran'ny seranam-piaramanidina an-dalamby ao an-dalamby
Ny mpiasan'ny Metro no isan'ireo fiara fitateram-bahoaka haingana sy haingana indrindra eto an-drenivohitra.
Manangana ny Ring Road ho any Beijing i Sina
Manangana Ankara renivohitra amin'ny lalam-piaramanidina